Izinhlobo Ezihlukile Zendwangu Yosilika
Uma ungumthandi wezindwangu zikanokusho, uzobe uxoxa nosilika, ifayibha eqinile yemvelo ekhuluma ngokunethezeka nangeklasi. Eminyakeni edlule, izinto zikasilika bezisetshenziswa ngabacebile ukubonisa isigaba. Kunezinhlobo ezahlukahlukene zezinto zikasilika ezifanele ukusetshenziswa okuhlukile. Ezinye zazo zifaka phakathi ...
Ungazilungisa Kanjani Izinkinga Eziphelile Zombala Kusilika
Ukuqina, ukukhanya, ukuncipha, ukuzinza, ubungqabavu, nokuningi okutholayo kusilika. Ukuvelela kwayo emhlabeni kwezemfashini akuyona impumelelo yakamuva. Uma uzibuza ngenkathi ibiza kakhulu kunezinye izindwangu, iqiniso lifihliwe emlandweni walo. Njengasemuva lapho iChina ibusa ...
Ngingayithengaphi i-Pillowcase kasilika?
I-pillowcases kasilika idlala impilo ebalulekile empilweni yomuntu. Zenziwe ngezinto ezibushelelezi ezisiza ukunciphisa imibimbi esikhunjeni futhi zigcina izinwele ziphilile. Okwamanje, abantu abaningi banesifiso sokuthenga ama-pillowcases kasilika, kepha lapho inkinga ikhona ukuthola indawo yokuthenga i-ori ...
Umehluko Phakathi Kosilika Kanye Nemabhele Usilika
Ngemuva kokugqoka usilika iminyaka eminingi kangaka, ngabe uyaqonda ngempela usilika? Njalo lapho uthenga isembatho noma izimpahla zasendlini, umthengisi uzokutshela ukuthi le yindwangu kasilika, kepha kungani le ndwangu kanokusho iyinani elihlukile? Uyini umehluko phakathi kukasilika nosilika? Inkinga encane: kanjani ...
Ukugqoka nokulala kusilika kunezinzuzo ezimbalwa ezengeziwe ezizuzisayo emzimbeni nasempilweni yesikhumba sakho. Iningi lalezi zinzuzo livela eqinisweni lokuthi usilika uyintambo yesilwane yemvelo ngakho-ke uqukethe ama-amino acid abalulekile umzimba womuntu awadingayo ngezinhloso ezahlukahlukene njengokulungiswa kwesikhumba kanye ne-h ...
Ungayigeza Kanjani Usilika?
Okokugeza izandla okuhlala kuyindlela engcono nephephile yokuwasha izinto ezintekenteke njengosilika: Isinyathelo1. Gcwalisa umcengezi nge <= amanzi asivivi 30 ° C / 86 ° F. Isinyathelo2. Faka amaconsi ambalwa okokuhlanza okhethekile. Isinyathelo3. Vumela ingubo icwilise imizuzu emithathu. Isinyathelo4. Hlanganisa izibiliboco ezizungeze i-t ...